Noho ny fanamboaran-dalana ataon’ny sampan-draharam-paritry ny asa vaventy Analamanga eo amin’ny fokontany Antsambilo, kaominina Ivato sy ny manodidina dia ho tapaka ny lalana manomboka androany sy rahampitso eny an-toerana. Mamonjy avy hatrany ny familian-dalana efa napetraka, araka izany, ireo mpitondra fiara rehetra. Mihodina any Ambatolampy Tsimahafotsy ireo taxi-be mampitohy an’Anjomakely sy Ivato ary mihodidina any Ambohidratrimo ireo hamonjy ny Croc farm sy iny tapany avaratry ny tanànan’Ivato iny.
Anisan’ny lalana tena be mpampiasa ary ivoahan’ny vokatra rehetra any ambanivohitra io ampahan-dalana amboarina eo Antsambilo io. Maro ireo tantsaha avy any amin’ny kaominina manodidina toa an’Anjomakely sy Imerimandroso, mitatitra ny vokatra toy ny vary sy tongolo ary legioma mampiasa izany lalana izany.
Hatry ny omaly, nanangona aireo tolo-tanana avy amin’ny fikambanana sy ny olon-tsotra ny Mouvement des Fokonolistes Eclairée de Madagascar, ho an’ireo fianakaviana rava trano noho ny haintrano niseho tetsy 67Ha. Nisy ny nanome lamba firakotra hisedrana ny hatsiaka amin’izao ririnina izao, tao ny nanome kojakojan-dakozia, ny hafa nanolotra vola sy solika nahafahana nivezivezy tamin’ny fanangonanana entana… Notetezina Antananarivo manontolo ka nahafahana nanagona izay voatsirambin’ny tanana ho fanampiana ireo traboina. Natolotra ny BNGRC sy ny sampan-draharaha ara-tsosialin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny komitim-pokontany ary ny komitin’ny traboina izany, omaly ka izy ireo no hiandraikitra ny fizarana.